Umatshini wokumakisha we-Laser we-Laser-Umatshini wokumakisha we-Laser we-Laser abavelisi, abaxhasi
Umatshini wokuPrinta weJinan weFektri yeGalvo yeFayibha yoMatshini wokuPhawula we-PVC PE
Ukugxilwa kwe-3D okuguqukayo kwe-CO2 laser yokumakisha / ukukrola / ukusika umatshini nge-200W CO2 RF laser ityhubhu yenzelwe ngokukrola i-2D / 3D kunye nokusika amakhadi ephepha, kubandakanya amakhadi eeholide, amakhadi esimemo, amakhadi omtshato, amakhadi eKhisimusi. Iinkcazo zeMveliso 3D Dynamic Focus RF CO2 umatshini wokumakisha we-laser uxhotyiswe ngombane ophezulu weRF laser ityhubhu engeniswe eMelika. Umatshini we-laser we-RF CO2 200W ngokuchaneka okuphezulu, isantya esiphezulu kunye nexesha elide lokusebenza. 3D Dynamic Ukugxila RF CO2 laser cut ...
Umatshini wokumakisha okuphezulu we-UV
Ukuchaneka okuphezulu kumatshini wokumakisha we-UV usebenzisa i-Ultraviolet laser esetyenziselwa ukumakisha okuphezulu kweeplastikhi, kubandakanya iPC (i-polycarbonate), i-PP (i-polypropylene), i-PE (i-polyethylene), i-PA, i-ABS, i-PMMA, i-silicon, iseramikhi kunye neglasi yeglasi, ngoku umatshini wokukrola we-UV laser uyathengiswa ngexabiso elifikelelekayo. Iinkcazo zeMveliso Umatshini wokumakisha we-UV we-UV ukwabizwa ngokuba ngumatshini wokukrola we-UV, onobulunga obuphezulu kunye nendawo encinci, kwaye ukuqhubekeka kwendawo echaphazelekayo yobushushu incinci, w ...
Isantya esiphakamileyo se-3D Crystal Laser Machine Machine
Umatshini wokukrola we-3D we-crystal can? Ukukrola ngaphakathi kwe-2D kunye ne-3D? Iipateni kwiglass, iglasi kunye ne-acrylic, njl izinto eziselubala, i-3D Cubiio compact laser engraver ilungele iimbasa, umfanekiso, amagama kunye nezinye? Isipho esenziwe ngentando yakho? Iinkcazo zeMveliso Umatshini wokukrola we-laser we-3D ngumatshini we-laser we-3D okroliweyo wokukrola i-2D okanye iipateni ze-3D, uyilo ngaphakathi kwekliphu yekristale okanye iglasi nge-laser. I-3D las ...
Intengiso eshushu I-Desktop Umatshini wokumakisha we-Laser we-Laser
JINAN APEX CNC Umatshini wokumakisha we-laser wesilivere ye-tungsten umsesane we-laser wokukrola umatshini we-laser yokumakisha isuti yesacholo yokumakisha kuzo zonke iintlobo zentsimbi kunye nenxalenye ye-nonmetal.
Inokumakisha ixesha, umhla, isicatshulwa, amanani kunye nenombolo yeenombolo, iilogo zenkampani, uphawu, iisimboli, iikhowudi zebar, okanye iikhowudi ze-2D, imatriki kunye neefonti zevektha kuyo yonke into ecwecwe, ipeyintiweyo, umgubo, i-powder, i-anodized, okanye i-plated metal surface, nokuba ngaba ngamacwecwe athe tyaba, imiphezulu egobile, okanye iisilinda. Xa amandla ngaphezulu kwe-30w 50w 60w 200w, ifayibha laser nayo inokukrola nzulu kunye nokusika ubucwebe bentsimbi, njengegolide, isilivere, titanium, intsimbi, ubhedu lobhedu njl.
Umatshini wokumakisha we-CO2 JPT Laser 30W Laser
Ifayibha laser Umatshini wokumakisha unokusetyenziselwa ukumakisha ilogo, inombolo ye-serial, ikhowudi yebar kunye nezinye iipateni ezintle nakweziphi na izinto zentsimbi ezinje ngentsimbi engenasici,
titanium, ubhedu, igolide, isilivere, ialuminiyam kunye neemveliso zobunjineli ezininzi ezifana nesigqubuthelo esiphathwayo kunye netshaja, sebenzisa izindlu zombane njl.
Umatshini wethu wokumakisha we-laser wamkela owona mgangatho uphezulu we-fiber laser emhlabeni. Sine-10w, 20w, 30w kunye ne-50w ngokuzikhethela.
Ubomi obuqikelelweyo kumthombo we-laser buya kuba malunga ne-100,000hours, ngamaxesha ali-10 obomi obude kune-diode laser kunye namaxesha ama-2 obomi obude kunomnye umthombo we-fiber laser.
Umatshini wokuMakisha weLaser wentsimbi ephathekayo kulula kakhulu ukuyisebenzisa, encinci, elula, ehambayo. Yeyona nto unokukhetha yona.
Umatshini wokumakisha we-CO2 weLaser othengisayo
I-APEXCNC uthotho umatshini wokumakisha we-laser we-CO2 uxhotyiswe nge-laser yerediyo eyenziweyo e-China (itywina lesinyithi) okanye ityhubhu yeglasi ye-laser, inkqubo ekhawulezayo yokuskena enezipili ezingcangcazelayo kunye nenkqubo yolawulo lwayo.
Desktop Laser mfanekiso Machine kunye CO2 Laser ukuthengiswa ashushu
Umatshini wokumakisha we-Laser we-Laser wentengiso eshushu
Intengiso eshushu I-Flying Laser yokumakisha umatshini kunye ne-20W yeFiber Laser Source
2021 Best Fibre Laser engumkroli kunye Full Enclosed Cover Cover Model
Uyilo loMatshini oMtsha weFayibha oMatshini oMatshini othengiswayo
Umatshini wokumakisha we-Laser we-CO2 uyathengiswa